'एकताबारे प्रारम्भिक कुरा अहिले र बाँकी ठूला सैद्धान्तिक कुराहरु महाधिवेशनबाट टुंगिन्छ'
कृष्णबहादुर महरा, वरिष्ठ नेता- नेकपा माओवादी केन्द्र
वाम गठबन्धनपछि भएको निर्वाचनमा उक्त गठबन्धनले भारी विजय हासिल गरेको छ । निर्वाचनपछि अहिले सरकार निर्माण र पार्टी एकताबारे छलफल, बहस र विवादहरु सतहमा आइरहेका छन् । यसैबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता कृष्णबहादुर महरासँग उक्त पार्टीको कार्यालय बैठक, सरकार निर्माण र पार्टी एकताबारे केन्द्रित भएर साझापोस्टले कुराकानी गरेको छ । छलफलका क्रममा अहिलेकै संविधानको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्नेगरी यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने बताएका उनले माओवादी र एमालेसँग सम्बन्धित सैद्धान्तिक सवालहरु केही एकता प्रक्रियामा र केही महाधिवेशनको क्रममा टुंग्याउने बताए । प्रस्तुत छ महरासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-
वाम एकताको उद्देश्यसहित वामगठबन्धन बनाएर चुनावमा जानुभयो । चुनावी परिणाम र आगामी बाटोबारे तपाईहरुको भर्खरै सम्पन्न पार्टीको बैठकमा कस्तो छलफल भयो ?
हिजो (सोमबार) हाम्रो पार्टी कार्यालयको बिस्तारित बैठक बस्यो । यो बैठकले सामान्यतः तीनवटा सवालहरुमा छलफल सुरु गरेको छ । समीक्षाको पहिलो विषय भनेको वाम गठबन्धनले राम्रो लहर पैदा गरेको छ भन्ने हो । प्रत्यक्षतर्फको हाम्रो विजय सामान्यतः ठिक छ तर, समानुपातिकमा हाम्रो भोट अलि कम भयो । यसमा पार्टी अलि सक्रिय भएर परिचालित भएन कि ? भन्ने छलफल भयो । यो समीक्षाको पाटो भयो तर पनि समग्रमा नकरात्मक सकरात्मक नै भन्नेछ । दोस्रो कुरा, पार्टी एकतासँग सम्बन्धित छ । पार्टी एकता गर्नुपर्छ, यसको विकल्प छैन । सम्मानजनक ढंगले पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु उठे । तेस्रो कुरा, सरकार बनाउनको निमित्त अध्यादेश र राष्ट्रियसभासँग सम्बन्धित जेजस्ता व्यवधानहरु देखा पर्न खोजेको छन्, ती कुराहरुलाई छिटोभन्दा छिटो सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भयो । यसैगरी, समानुपातिकतर्फ हामीलाई निर्वाचन आयोगले पत्र लेख्नेबित्तिकै सहिद र बेपत्ता परिवार, जेष्ठ सदस्यहरु, पार्टी एकता आदिलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ भन्ने मोटामोटा छलफल भएका छन् । यी कुराहरु निर्णयका रुपमा होइन कि छलफलका रुपमा मात्र भएका भएका हुन् ।
यहाँले सम्मानजनक पार्टी एकताको कुरा गर्नुभयो । तर, एमालेका केही नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा त एकता सम्मानजनक होला जस्तो लाग्दैन नि, होइन र ?
निश्चय पनि, एमालेका सबैले होइन, केही नेताहरुले सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरु पार्टी एकतालाई त्यति सम्मान नगर्ने भावसहित आएको देखिन्छ । उहाँहरुले त्यस्तो बोल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामी दुवै पार्टीको सम्मानजनक मर्ज हुनुपर्छ भन्नेमा छौं ।
मर्ज गर्ने केही आधार त होला नि, चुनावी गठबन्धनमा जस्तै ६०/४० को आधारमा हो कि अरु केही आधार छन् ?
हामीसँग पार्टी संयोजन समिति छ । पार्टी संयोजन समितिमा छलफल, बहस हुन्छ । त्यहाँ अलि गहन छलफल हुन्छन् । धेरै विषयहरु छन्, वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक विषयहरु पनि छन् । ती सबै विषयहरुमा सांगोपांगो छलफल भएर नै टुंगिन्छ । कसरी टुंगिन्छ भन्ने कुरा त्यतिबेला छलफलमा उठ्ने कुरा हो ।
एमाले र माओवादी एकताको केही सैद्धान्तिक आधारहरुको पनि खोजी गर्नुपर्ला । विगत हेर्दा बाटाहरु फरक देखिन्छन् !
केही कुरा अहिले टुंग्याउनु नै पर्छ । प्रारम्भिक कुराहरु टुंग्याइन्छन् । बाँकी अलि ठूला कुराहरु महाधिवेशनमा गएर टुंग्याउन सकिन्छ ।
भनेपछि, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन्छ, कुनै आशंका गर्नुपर्दैन ?
एकता गर्नुको विकल्पै छैन । छलफल बहसले केही समय लेला, तर एकता गर्नैपर्छ भन्ने आम जनता माग र राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो ।
यसअघि निर्वाचनमा अभिव्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरु राजनीतिक दलहरुले पूरा गर्न सकेका छैनन् । वाम गठबन्धनमार्फत चुनावमा जाँदा जनताले एउटा उत्साह देखाएकै पाइन्छ । यसपटकको प्रतिवद्धता पूरा होलान् भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?
यहाँले भन्नुभएको सही हो । अहिले जनतामा उत्साह देखिएको छ । यो गठबन्धनकै परिणाम हो र गठबन्धन जनताद्वारा अनुमोदित पनि भएको छ । जनताले स्थिरता र समृद्धि खोजेको छन् । हामीले आगामी दिनमा समृद्धि र स्थिरतामा विशेष ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ । हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौं ।
यहाँले स्थिरताको कुरा त गर्नुभयो । तर, गठबन्धनका नेता ओलीले ५ वर्ष संविधान संशोधन हुन्न र शासकीय स्वरुप पनि फेरिन्न भन्ने अभिप्रायको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । सदनको अंकगणित र विगतको अभ्यास हेर्दा त स्थिरता कायम होलाजस्तो लाग्दैन त ?
होइन, अहिले हामी संविधानको भावना र मर्मलाई यताउति गर्ने पक्षमा छैनौं । त्यसका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने कुरा र त्यसलाई ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै गर्न सकियो भने पनि स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिले वामपन्थीहरुको स्पष्ट बहुमत भएको कुराले त्यो समस्या पर्दैन ।
पार्टी बैठकमा यहाँहरुको अध्यक्षले कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको बताउनुभएछ । एमाले सम्मानजनक एकताको पक्षमा नरहेको अवस्थामा त्यो विकल्पमा अगाडि बढ्न सकिने सम्भावना कत्तिको छ ?
अहिले त्यो सम्भावना कम छ । अहिले वाम तालमेलको आधार छ । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने कुरामा त कुनै आशंका नै छैन । अरु पार्टीहरुले प्रधानमन्त्री दिएर अर्कै खालको सरकार बन्ने सम्भावना निकै कम छ ।